आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ १९ गते। शनिबार। - KalaiyaLive.Com.Np
कलैया 34	℃
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ १९ गते। शनिबार।
कलैयालाईभ June 2, 2018
इश्वी सन् २०१८ जुन २ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ अनलागा। अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। तिथि– चतुर्थी, २६:०३ बजेउप्रान्त पञ्चमी। नक्षत्र– पूर्वाषाढा, ७:३४ बजेउप्रान्त उत्तराषाढा। योग– शुक्ल, १८:५७ बजेउप्रान्त ब्रह्म। करण– वव, १३:०१ बजेदेखि वालव, २६:०२ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा मातंग योग। चन्द्रराशि– धनु, १४:१४ बजेउप्रान्त मकर। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१० बजे, सूर्यास्त– १८:५४ बजे र दिनमान ३४ घडी २० पला।
इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। रोमान्टिक सम्बन्धमा आज कमी हुन सक्छ। आज एउटा कठिन दिन रहेको छ; तर धैर्य र शान्त भएर हरेक बाधा जित्न सकिन्छ। व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। कहिलेकाहीं, तपाईंले सम्बन्ध तीतो बनिनबाट जोगिनको लागि शान्त हुनु आवश्यक छ। यस दिन तपाईंका धैर्यताको परीक्षण हुन सक्छ।
काममा र घरमा केही दबाव पर्नाले तपाईंलाई छिट्टै रिसाउने बनाउँछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। आफन्तहरूले तपाईंको बढी उदार व्यवहारको अनावश्यक लाभ लिने प्रयास गर्नेछन्। आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् अन्यथा तपाईंलाई धोका हुन सक्छ। केही हदसम्म उदारता राम्रो हो भनेर तपाईंले बुझ्नुपर्छ तर यसले सीमा पार गर्यो भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो प्रियले गरेको टिप्पणीले अत्यधिक संवेदनशील हुनुहुनेछ – आफ्नो भावना नपोख्नुहोस् र तपाईंलाई पछि पश्चात्ताप हुने अनुत्तरदायी केहि नगर्नुहोस्। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बिताउनको लागि एकदम राम्रो समय प्राप्त गर्नुहुनेछ।
व्यस्त कामको सयमले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। अनावश्यक तर्कले परिवारमा तनाउ उत्पन्न गर्न सक्छ। तर्क मार्फत प्राप्त कुनै पनि जीतलाई सही जीत हो भनेर नसम्झनुहोस्। सकेसम्म यसबाट बच्नको लागि आफ्नो तार्किक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्ना अग्रजहरूले भनेको सुन्नुहोस् र शान्त भएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नुहोस्। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। तपाईंले सीधा जवाफ दिनुभएन भने तपाईंका साथीहरू नाराज हुने सम्भावना छ। आफ्नो योजनामा अन्तिम मिनेटसम्म पनि परिवर्तनहरू हुन सक्छ दिन। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन्। निवेश गर्न र अनुमान लगाउनको लागि राम्रो दिन होइन । आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईंको कार्यालयको कामकाजमा केही खतरा हुने सम्भावना छ। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक-अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। तपाईंले कठिन जस्ता देखिने समस्याहरूको हल गर्न आफ्ना सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। पुरानो समाचार प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीलाई अझै मायालु बनेको पाउनुहुनेछ।
गर्भवती आमाको लागि राम्रो दिन होइन। तपाईं हिड्दा धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। आज तपाईंलाई गलत साबित गर्न मन पराउने एउटा लुकेको शत्रु हुनेछ। आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
धेर नखानुहोस् र कडा पेय पनि नलिनुहोस्। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। अनपेक्षित अतिथिले साँझ तपाईंको घरमा भीड लगाउनेछन्। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। काममा आजको दिन एउटा अद्भुत दिन जस्तो देखिन्छ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आज यदि तपाईंले चिनेका मान्छेमा कुनै पनि निर्णय थोप्ने प्रयास गर्नुभयो भने – तपाईंले आफ्नै चासोको मर्माहत हुने मात्र अन्त गर्नुहुनेछ – धैर्यपूर्ण तरीकाले स्थितिलाई स्याहार्नु नै अनुकूल परिणाम पाउने तरिका हो। तपाईंले राम्रो व्यवहार गर्नु आवश्यक छ किनभने तपाईंको प्रेमी धेरै अप्रत्याशित मुडमा हुनेछ। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण प्रमाणित हुनेछ। तपाईंको जोडी आज धेरै आत्म केन्द्रित हुन सक्छन्।
अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस् र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। तपाईंको खर्चमा वृद्धि हुनाले मनमा चिन्ता हुनेछ। एक-अर्काको मत बुधेर व्यक्तिगत समस्याको समाधान गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई सार्वजनिक नगर्नुहोस् अन्यथा तपाईंलाई बदनामी गर्ने सम्भावना धेरै छ। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। आफ्नो मोबाइलसे तपाईंलाई काममा समस्या दिन सक्छ। यसलाई धेरै प्रयोग नगर्नुहोस्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आफ्नो इच्छा अनुसार आज केही काम नहुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग सुन्दर समय बिताउनु हुनेछ।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। तपाईं आफ्नो दिनको लागि बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै खर्च गर्ने झुकावमा विचार गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूको मद्दतले तपाईंको आवश्यकतामा ध्यान दिनेछ। “केही कुरा हुन्छ भनेर नपर्खिनुहोस् – बाहिर निस्केर नयाँ अवसर खोज्नुहोस्।” तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। वैवाहिक जीवनले आज तपाईंलाई आफ्नो नराम्रो पक्ष देखाउन सक्छ।
तपाईंको मन हालका घटनाहरूले विचलित गर्नेछन्। ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। वित्तीय कठिनाइले आलोचना र तर्क गराउन सक्छ – तपाईंबाट धेरै आशा गर्ने मानिसहरूलाई हुँदैन भन्न तयार हुनुहोस्। पारिवारिक जीवनको लागि उचित समय र ध्यान दिनुहोस्। कार्यालयमा धेर बस्नाले परिवारमा समस्या पैदा हुन सक्छ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई तपाईंले तिनीहरूलाई हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। तपाईंको सहयोगी मनोवृत्ति र विश्लेषणात्मक कौशललाई याद गरिनेछ। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।